FILE - A picture illustration shows Mexican pesos and U.S. dollars banknotes in Mexico City.
Sangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika, kana kuti Cross Border Association, raparura homwe yechirongwa chekukweretesa vanhu mari inosvika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora kubva kubhanga guru renyika.
Muzvari Chademana vati bazi ravo richakwanisa kuita kuti vanhu vapihwe chikwereti kuburikidza neHomelink iyo inenge yapihwa mari nebhangi guru renyika.
Vanhu vanosungirwa kuvhura mabhuku ekubhangi nemadhora mashanu chete nebhangi reAgribank uye kuti munhu ave nhengo inozopihwa chikwereti anofanirwa kubhadhara mari inoita madhora zana iyo vazvinji vanoti yakawanda.
VaBasil Shana avo vapinda musangano wanhasi vati madhora zana imari yakawanda uye vanokurudzira kuti dai yadzikiswa.
Mumwe mudzimai anoita zvekutenga midziyo yemumba nezvekupfeka kuTanzania, Amai Cornilia Sunday, vanoti vanotenda maruva vadya chakata sezvo pane zvirongwa zvakawanda zvakambouya asi hapana zvavakawana.
Mushandi webazi reSmall Medium Enterprise(SME), VaMuzamano Munyaradzi, vakurudzira vanhu kuti vashandise mari yavachakwereta kutenga zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika kuti vawane mari yekuAmerica.
Muzvari Chademana vakatyamadza vanhu vapinda musangano wanhasi vachiti vanotora mari yechikwereti nebazi ravo vanofanirwa kutaura zvakanaka pamusoro penyika nevatungamiri kwete kushoropodza nyika kana vari kunze kwenyika.
Asi mumiriri weCross Boarder Association muChinhoyi, VaClifford Khlupheko, vanoti chirongwa ichi hachishande zvakanaka sezvo chiri chebhanga guru renyika iro rinotevedzera zvinodiwa kana munhu achida mari munyaya dzemabhizinesi.
Munhu anenge ave nhengo anokwanisa kutora mari yechikwereti inosvika madhora chiuru iyo anobhadhara kwemwedzi mitatu yava zvikwamu zana nechimwe kubva muzana.
Mari yechikwereti inobuda mumazuva matatu kubva painenge yanyorerwa.